फिदिम नगर कप फुटबल सुरु, झापाको विजय सुरुआत « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०७८, मंगलवार १९:०४
पाँचथर, २८ मङ्सिर
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–७ रानीटारमा फिदिम नगर कप फुटबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ ।
रानीटारस्थित बराजु खेलमैदानमा आयोजित प्रतियोगिताको नेपाल अलैंची ब्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले रेफ्रीलाई फुटबल हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गर्नुभयो । स्वतन्त्र क्लब रानीटारको आयोजना तथा रानीटार युनाइटेड क्लबको सहआयोजनामा आयोजित प्रतियोगिताको प्रवर्द्धकमा फिदिम नगरपालिका रहेको छ । भारतको एक सहित नौ फुटबल टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता पुस ३ गतेसम्म चल्नेछ ।
आज भएको उद्घाटन खेलमा अल इन वान सैनिक क्लब झापाले शानदार विजय सुरुआत गरेको छ । आयोजक स्वतन्त्र क्लबलाई ७–३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले विजय निकालेको हो । झापाका लागि पुजन राईले ह्याट्रिक गरे । झापाका लागि दीपेश श्रेष्ठ र आशिष गुरुङले २–२ गोल गरेका थिए । आयोजक टिमका लागि अर्जुन गुरुङले दुई तथा किस्मत लिम्बूले एक गोल गरेका थिए । ह्याट्रिक गर्ने राई उद्घाटन खेलको म्यान अफ दी म्याच घोषित हुँदै पुरस्कृत भए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत भोलि दुई वटा खेल हुने आयोजकले जनाएको छ । भोलि पहिलो खेलमा दिउँसो १२ः३० बजे योङ ब्वाइज क्लब इलाम र कर्णसिंह सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङवीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यस्तै दोश्रो खेलमा दिउँसो ३ बजे पशुपति–११ क्लब इलाम र चर्च ब्वाइज क्लब काठमाण्डौंवीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएका छन् । प्रतियोगिताका विजेताले रु. एक लाख ५० हजार तथा उपविजेताले रु. ८० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।